သူဆွံ့အနေမှန်းမသိဘဲ Instagram ကနေ ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်…. နိုင်းလ် (Nyle) - Shape Journal
Home Choice E သူဆွံ့အနေမှန်းမသိဘဲ Instagram ကနေ ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်…. နိုင်းလ် (Nyle)
သူဆွံ့အနေမှန်းမသိဘဲ Instagram ကနေ ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်…. နိုင်းလ် (Nyle)
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Audience’s Choice ကဏ္ဍလေးအတွက်ကိုတော့ America’s Next Top Model ပြိုင်ပွဲဝင် နိုင်းလ်ဒီမာကို အကြောင်းရွေးချယ်ထားပါတယ်။ ထူးခြားချက်ကတော့ America’s Next Top Model ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာ ပထမဆုံးဆွံ့အသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပါပဲ။ သူရဲ့မိဘ၊ ညီအစ်ကိုတွေနဲ့ အဘိုးအဘွားတွေအားလုံးက ဆွံ့အသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Gallaudet ကနေ သချာင်္နဲ့ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး Sign Language ကို သင်ယူခဲ့ပါတယ်။
နိုင်းလ်က America’s Next Top Model ပြိုင်ပွဲမ၀င်ခင်ကတည်းက မော်ဒယ်လောကမှာ တစ်နှစ်ကျော် ကျင်လည်ခဲ့သူပါ။ America’s Next Top Model ထုတ်လုပ်သူတွေက သူ့ကိုဆွံ့အနေမှန်းမသိဘဲ Instagram ကနေ ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းအနေနဲ့လည်း American sign Laguage ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ In The Can Alone Again ဇာတ်ကားမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။
နိုင်းလ်က သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တဲ့ ဆွံ့အနေတာကို ချို့ယွင်းချက်ရှိတယ်လို့မယူဆဘဲ လူအများ စိတ်ဝင်စားခံရဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးချခဲ့သူပါ။ သူဆွံ့အနေခြင်းက ကြော်ငြာပစ္စည်းတွေ အတွက်ပိုပြီးအသက်ဝင်စေတယ်လို့ယုံကြည်ထားသူတစ်ယောက်ပါ။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းအနေနဲ့လည်း ဆွံ့အနားမကြားတဲ့ဇာတ်ဆောင်ကို ဆွံ့အနားမကြားသူသာ သရုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ ယူဆထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
America’s Next Top Model မှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ ဆွံ့အနေတဲ့ နိုင်းလ်က ပရိသတ်တွေအတွက် ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာပါတော့တယ်။
America’s Nexr Top Model ဆိုတာ ခင်ဗျားအတွက်ဘယ်လောက်အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသလဲ။
ကျွန်တော့်အတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကတော့ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားကိုအသုံးမပြုနိုင်တာပါဘဲ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပါ။
ကျွန်တော်ပထမပိုင်းတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေးမိပါတယ်။ “ငါဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါလိမ့်” “ဘာလို့ဒီလိုလုပ်မိတာလဲ” စသည်ဖြင့်ပေါ့။ နောက်အပိုင်းတွေမှာ ပိုပြီးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်လာခဲ့ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံဆရာကကျွန်တော့်ကိုဖက်ရှင်လောကထဲဝင်စေချင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် အမြဲတမ်းအားပေးတယ်။ အခုဆို သူငယ်ချင်းတွေလိုဖြစ်နေပါပြီ။ ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံး သူကတော်တော်ကူညီခဲ့ပါတယ်။